Soosaarayaasha & Alaableyda baaldi-qodayaasha - Warshadda baaldi ee Shiinaha
Dhul qodista baaldiga
Excavator wuxuu xoojiyaa baaldiga dhulka
Baaskiil dhagaxa qodda
Qodista baaldi shaandho leh
Excavator coupler dhakhsaha badan
Ilka baaldi qodista
excavator deg deg ah coupler
ilig baaldi qodaya
qodista waxay xoojisaa baaldiga dhulgariirka
baaldi shaandho baaldi
baaldi dhagax weyn
qodista baaldiga dhulgariirka
Mini baaldi qaaddo yar 40 ballaaran
Waxay qaadataa tayo sare leh bir qaabdhismeed tayo sare leh iyo kursiga iliga baaldi oo tayo sare leh, kaas oo badbaadiya waqtiga hawlgalka oo leh waxtarka sare.
Marka la barbardhigo baaldiga la xoojiyay, baaldiga dhagaxa ayaa ka xoog badan oo lagu kalsoonaan karo. Baaskiilka dhagaxa weyn ee dhulka hoostiisa kuyaala wuxuu waafajiyaa saxanka dhumucda hoose, salka hoose ku dar saxanka xoojinaya, ku dar saxanka waardiyaha dhinaciisa, rakib saxanka waardiyaha dhinac, kan haysta ilkaha baaldi baaldi oo xoog badan, oo ku habboon munaasabadaha xilliyada sare, sida quruuruxa,
Iska caabbinta xirashada wanaagsan, qaadista adeegga dheer, qaab dhismeedka fudud iyo dayactirka habboon.
Xoog leh adkeysi leh oo hufan, waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu furfuro baaldiga dhagaxa. ripper-culus oo waajibaadka culus leh wuxuu leeyahay awood jeexjeexan waana xirmooyin lama huraan u ah ka saarida carqaladaha dhulka, oo ay ku jiraan dhagxaanta, xididada iyo carqalado kale oo badan.
Faa'iidada Badeecadeena 1) Heerka Qaranka 2) Wax tayo sare leh 3) Xoog-sarre, 4) Qalafsanaan weyn, 5) Cimri dheer iyo awood qaadasho xoog leh, 6) Waxay gudubtay kormeeraha waaxda qaran ee awooda. 8) Macaamiil duug ah ayuu helay kalsoonidiisa.
Waxay leedahay astaamaha is haysta, dabacsan, shaqooyin badan iyo hufnaan sare, waxqabadkeedana, buuq iyo soo saariddu waxay la kulmaan heerka caadiga ah.
Mini baaldi qaaddo yar 70 ballaaran
Hawlgal fudud, qalab hawlgal habboon, oo la jaan qaadaya jiilka cusub ee jawiga shaqada ergonomic.
NAGA SII JOOJI TAARIIKH NAGU SOO JEEDA
Baaldiyeheenna qodda - Dammaanad qaali ah ...
XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTD. oo ku yaal magaalada ugu caansan mashiinnada dhismaha ee Xuzhou, Shiinaha. Maaddaama ay tahay mashiin dhisme oo xirfadle ah iyo qaybaha dhoofinta, Minyan waxay leedahay sannado badan suuqgeyn ...
Waa maxay kala soocidda iyo shaqooyinka ...
Qod-jeexayaashu waxay ka shaqeeyaan munaasabado kala duwan waxayna dooran doonaan agabyada kala duwan ee qalabka, qalabka caadiga ah sida baaldiyo, jabiyayaasha, rippers, hagaha haydhka iyo wixii la mid ah. Kaliya adoo dooranaya ...
Waa maxay halabuurka iyo isticmaalka ...
Baaldi waxaa loola jeedaa xubin u eg baaldi oo loo isticmaalo in lagu qodo alaabta dabacsan sida carrada, ciidda jaalaha ah, dhagxaanta iyo qashinka dhismaha. Waxay ka kooban tahay saxanka hoose, saxanka gidaarka, saxanka dhegta, dhegta ...
- Khariidadda bogga